သငျသညျအကြှနျုပျ၏ထင်မြင်ချက်ကိုမလိုချင်ခဲ့လျှင်, သင်မမေးသင့်ပါတယ်! | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 28, 2008 Douglas Karr
လွန်ခဲ့သောတစ်လခန့်ကကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အလုပ်လုပ်သောကုမ္ပဏီများထံမှကျွန်ုပ်ထံပေးပို့ခဲ့သည့်ပြည့်စုံသောစစ်တမ်းတစ်ခုကိုနာရီပေါင်းများစွာအချိန်ဖြုန်းခဲ့ပြီးပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းများလုပ်ဆောင်နေသည်။ ငါရှိနေတုန်းကုမ္ပဏီထဲကိုငါနှလုံးသားတွေ ၀ င်လာတယ်။ ဒီနေ့အထိသူတို့ရဲ့လူတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေနဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတွေကိုချစ်နေတုန်းပဲ။ သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်သည်ကုမ္ပဏီမှထွက်ခွာသွားသည့်တူညီသောအကြောင်းပြချက်များ - ကျွန်ုပ်တို့သည်ပလက်ဖောင်းကိုပြန်လည်ရောင်းချရန်အလုပ်လုပ်စဉ် - bloated interface, features၊
ငါအချိန်ကုန်အခါငါစစ်တမ်းကိုတုံ့ပြန်ရန်ငါ၏အ inbox ထဲမှာစစ်တမ်းဖိတ်ကြားချက်ကိုအလံ။ ထိုညနှောင်းပိုင်းနှင့်နောက်နေ့မနက်၌ကျွန်ုပ်သည်စစ်တမ်းကောက်ယူမှုအတွက်တစ်နာရီနှစ်နာရီခန့်အချိန်ယူခဲ့ရသည်။ ပွင့်လင်းသောစာသားရိယာတစ်ခုဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်တိုက်ရိုက်ဝေဖန်မှုခံခဲ့ရသည်။ နောက်ဆုံးတွင်ပြန်လည်ရောင်းချသူအနေဖြင့်သူတို့၏ထုတ်ကုန်များတိုးတက်လာခဲ့သည် my အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွား။ ငါမဆိုလာကြတယ်ဆွဲထုတ်ခြင်းနှင့်ငါအဓိကပြissuesနာတွေဖြစ်မခံစားရသောအရာကိုအပေါ်အလွန်ရှေ့တက်ခဲ့သည်။ ငါကုမ္ပဏီမှထွက်ခွာသွားသောစွမ်းရည်ကိုလည်းထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီးသူတို့မှာကောင်းမွန်သော ၀ န်ထမ်းများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
စစ်တမ်းကောက်ယူမှုသည်အမည်မသိသော်လည်းတင်သွင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်ပုံတင်အမှတ်အသားတွေကိုခြေရာခံမိသည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ ကျွန်တော်ကမည်သည့်ဂယက်ရိုက်ခတ်မှုကိုမဆိုစိုးရိမ်ခဲ့သည်၊ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ချက်ကိုမေးမြန်းပြီး၎င်းတို့အားကျွန်ုပ်အားကမ်းလှမ်းချင်သည်။
ယနေ့စပျစ်ပင်မှတဆင့် (ရှိပါတယ် အမြဲတမ်းစပျစ်ပင်), ငါသည်ငါ့မှတ်ချက်တွေကုမ္ပဏီမှတဆင့် reverber ခဲ့ကြောင်းနှင့်ငါတိုတိုပြောရလျှင်, ငါမဆိုဆက်ဆံရေးကိုထပ်မံဖို့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ကြိုဆိုခဲ့ကြဘူးသောတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်
ရလဒ်ကတော့ကျနော့်အမြင်မှာအမြင်အာရုံချို့တဲ့ပြီးမရင့်ကျက်သေးပါဘူး။ ကျွန်တော့်ကိုဘယ်သူမှပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဆက်သွယ်ခြင်းသည်ကျွမ်းကျင်မှုကင်းမဲ့ကြောင်းကိုလည်းပြသသည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်ကျေးဇူးတင်စရာ၊ စျေးကွက်တွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများများစွာကျွန်ုပ်ထွက်ပေါ်လာသောငွေကြေးနှင့်ကျွန်ုပ်အတွက်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ကျွန်ုပ်လိုအပ်သောအရာကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ကုမ္ပဏီဟောင်းကိုလတ်ဆတ်သော၊ ရိုးသားသောတုံ့ပြန်ချက်အချို့ပေးခြင်းဖြင့်ကူညီရန်မျှော်လင့်ခဲ့သည်။
သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ချက်ကိုမလိုချင်ပါက၊ အဲဒါကကျွန်တော့်ရဲ့အချိန်နာရီအနည်းငယ်ကိုသက်သာစေပြီးဘယ်သူ့ကိုမှစိတ်ထိခိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး သူတို့ဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းငါသူတို့နဲ့ဆက်နွှယ်မှုရှိအောင်ဘာမှလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။
28:2008 pm တွင်အောက်တိုဘာ 3, 25
ဒီနေရာမှာ စဉ်းစားသင့်တာတစ်ခုကတော့ မင်းကြားတဲ့သတင်းက တရားဝင်လား၊ ကောလဟာလလား။ ရုံးများသည် ကောလာဟလ ပျံ့နှံ့မှုအတွက် ကြောက်စရာကောင်းသော နေရာများ ဖြစ်သည်၊ သင့်တင်ပြချက်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်နေသူများသည် ၎င်းတို့တွင် မရှိသင့်သည့် အရာအချို့ကို လှန်ပြောပြီး ၎င်းတို့ကို အနီးနားရှိလူများက ကြားပြီး တရားဝင်မူဝါဒအဖြစ် ယူသွားခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့နောက် ကောလဟာလသည် ပုံပျက်ပန်းပျက်ဖြစ်ပြီး နားထောင်ရသည့် ရိုးရှင်းသောကိစ္စမှ ပိုဆိုးသည့်အရာသို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။
သေချာတာကတော့ ထင်ကြေးပေးရုံသက်သက်ပါ 🙂 သင်ပြောနေတဲ့ ဘယ်ကုမ္ပဏီနဲ့မဆို ပြတ်တောက်သွားတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီအချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးရမယ့် မေးခွန်းက ငါ ဂရုစိုက်သလား။ အကယ်၍ သင့်တွင် ဤကုမ္ပဏီအပေါ် နာကျင်ခံစားရပါက (သင့်ရာထူးတွင် သင်ထင်မြင်ယူဆသည့်အတိုင်းဖြစ်သည်)၊ ထို့နောက် ၎င်းတို့နှင့် အမှန်တကယ် ဆက်လက်လက်တွဲလိုပါသလား။
28:2008 pm တွင်အောက်တိုဘာ 6, 40
ကြီးမားသောတုံ့ပြန်ချက်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ခရစ်ယာန်။ ကောလဟာလ သို့မဟုတ် အဖြစ်မှန်နှင့် ပတ်သက်၍ သံသယများ ရှိခဲ့ပါက ကျွန်ုပ်တွင် သေချာပေါက် ပို့စ်တင်မည်မဟုတ်ပါ။ အမှန်ပင်၊
မည်သည့်ကုမ္ပဏီအတွက်မဆို သင်ခန်းစာမှာ၊ သင်သည် အလွန်အပျက်သဘောဆောင်သည့် တုံ့ပြန်ချက်ရယူရန် အသင့်မဖြစ်ပါက၊ တောင်းဆိုသည့် စစ်တမ်းကို မပေးပို့ပါနှင့်။
28:2008 pm တွင်အောက်တိုဘာ 8, 48
28:2008 pm တွင်အောက်တိုဘာ 9, 25
Ross၊ ဒါအကောင်းဆုံးမှတ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တာက ကုမ္ပဏီတော်တော်များများက သူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေ၊ ဖောက်သည်တွေကို မဟုတ်ဘဲ ဒေါ်လာနဲ့ သစ္စာခံဖို့ ကတိကဝတ်ပြုတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်သည် ကုမ္ပဏီတွင် အစုရှယ်ယာများ မပိုင်ဆိုင်သည့်အပြင် ၎င်းတို့ကို ကျွန်ုပ်ဘာမျှ မပေးရသောကြောင့် ဤအရာကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ မယူသင့်ပါ။ မြန်မြန်ကျော်ပြီး နားထောင်ချင်တဲ့ ကုမ္ပဏီကို ရှာလိုက်မယ်။
29:2008 pm တွင်အောက်တိုဘာ 2, 18
တကယ့်ပြဿနာမှာ ကုမ္ပဏီသည် ရှေ့သို့တည့်တည့် ခက်ခက်ခဲခဲ တုံ့ပြန်ချက်ရယူခြင်း၏ တန်ဖိုးကို နားမလည်ခြင်းကြောင့်ဟု ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ Doug က ပြောခဲ့သလို အဆိုးနဲ့ အကောင်းကြားတာကို စိတ်မဝင်စားဘူးဆိုရင်၊ သင်နဲ့ ရိုးသားနိုင်တဲ့သူကို မမေးပါနဲ့။ သင်ရှာနေသည့်အရာအားလုံးသည် ကောင်းသော၊ အပြုသဘောဆောင်သော၊ နွေးထွေးသော၊ မပီမသ တုံ့ပြန်ချက်ဖြစ်ပါက။ ထို့နောက် သင်ထံမှ တုံ့ပြန်ချက်ရယူလိုသော ဖောက်သည်/ဖောက်သည်များကို လက်ဖြင့်ရွေးကာ ၎င်းတို့ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး "ကျွန်ုပ်တို့ကို မည်ကဲ့သို့ နှစ်သက်သနည်း" ဟု မေးပါ။ မေးစရာတစ်ခုက ဒါပါပဲ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လက်တွေ့မှာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကြားရတာကို တကယ်စိတ်ဝင်စားနေပုံရတယ်။
သင်ရောင်းချရန်ကြိုးစားနေသော ဝန်ဆောင်မှုအကြောင်း အနည်းငယ်နှင့် ၎င်း၏စွမ်းရည်များကို အမှန်တကယ်အသုံးပြုရန် ဆိုလိုရင်းကို အနည်းငယ်သိသော ဖောက်သည်တစ်ဦးရှိနိုင်သည်ကို မေ့ထားလိုက်ပါ။ သင်လျစ်လျူရှုနေသော ဖောက်သည်သည် ဖောက်သည်များအားလုံး မေးသင့်သည့်မေးခွန်းများကို သိနိုင်လောက်အောင် ထက်မြက်သူဖြစ်နိုင်ပြီး ၎င်းတို့ထဲမှ 95% သည် သင့်ကိုယ်ပိုင်ဝန်ဆောင်မှုအကြောင်းကို သင်ပြောပြသည်မှလွဲ၍ အခြားဘာကိုမှ မသိသောကြောင့် မဟုတ်ပါ။
သင့်မှာရှိနေတဲ့အရာတွေကို ပြုပြင်မွမ်းမံပြီး ပိုကောင်းအောင် မပြုပြင်ချင်ဘူးဆိုရင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အချိန်တွေကို မဖြုန်းတီးပါနဲ့။ မင်းရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုလိုမျိုး တခြားဝန်ဆောင်မှုတွေ အများကြီးရှိသေးတယ် ငါတို့အစား "မျောက်" နဲ့ လုပ်လို့ရတယ်။
29:2008 pm တွင်အောက်တိုဘာ 3, 22
မည်မျှပင် အပျက်သဘောဆောင်သော တုံ့ပြန်မှုမျိုးရှိပါစေ ကုမ္ပဏီသည် ၎င်းအား တိုးတက်မှုအတွက် အခွင့်အရေးအဖြစ် ယူသင့်သည်။ သူတို့တောင်းသမျှကို အတိအကျပေးတယ် သူတို့လိုချင်တာရရင် ပျော်ရမယ်။
တရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့ ခံစားရရင် မကောင်းတာကို လျစ်လျူရှုပြီး ကောင်းတာကို လုပ်ပါ။
အမည်မသိထင်မြင်ချက်တစ်ခုတောင်းပြီး မင်းကို ချုပ်နှောင်ထားတာက တော်တော်မိုက်တဲ့အပြုအမူပဲ။
ကျွန်ုပ်၏ထုတ်ကုန်ကို ပြန်လည်ရောင်းချနေသောသူတစ်ဦးကို ကျွန်ုပ်အဘယ်ကြောင့် ခွဲခြားရမည်နည်း။
29:2008 pm တွင်အောက်တိုဘာ 4, 22
ဒါက ပိုကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီများသည် ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင် အလွန်တက်ကြွစွာ (သင်ကိုယ်တိုင်ကဲ့သို့) တက်ကြွနေသူများအကြောင်း ၎င်းတို့ပြောသည့်စကားကို ဂရုပြုရန်လိုသည်။ ဘလော့ဂါတွေကို သတင်းသမားကို ဆက်ဆံသလိုမျိုး ဘလော့ဂါတွေကို ဆက်ဆံဖို့ လိုပါတယ်။ သူတို့က မင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်ကို တောင်းဆိုနေတယ်ဆိုရင် အဲဒါကို အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဝေဖန်မှုအဖြစ် သုံးတာ ဒါမှမဟုတ် လျစ်လျူရှုဖို့ လိုပါတယ်။ သူတို့လုပ်နိုင်တာက အဆိုးဆုံးက မင်းကို အဲလိုဆက်ဆံတဲ့ ဘလော့ဂ်မှာ တင်ထားလိုက်ပါ။ သူတို့အပေါ် လုံးဝ ကောင်းကောင်းမတွေးပါဘူး။
29:2008 pm တွင်အောက်တိုဘာ 5, 43
Colin က အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိတော့ မှန်မယ်ထင်တယ်။ ဆိုးရွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခု ကြုံလာတဲ့အခါ လူအများက ငါ့ကို စီးပွားရေးလုပ်ရမှာကို မကြောက်ချင်ကြဘဲနဲ့ ဘလော့ဂ်လုပ်လို့ ရပါတယ်။ အပေါ်မှာ သင်သတိထားမိသလိုပဲ ငါက ဘယ်သူလဲဆိုတာ ဘယ်တော့မှ မပြောဘဲ ငါဘယ်တော့မှ လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။
ကျွန်ုပ်၏ အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်းအချို့သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် အလုပ်လုပ်ကြပြီး ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းကို ထိခိုက်စေရန် မည်သည့်အခါမျှ ရန်စရန် မကြိုးစားခဲ့ကြသော်လည်း မေးသောအခါတွင် ကျွန်ုပ်သည် ဆက်လက်၍ ရိုးသားပါမည်။
30:2008 pm မှာအောက်တိုဘာ 12, 18
Doug၊ ဒီလိုဖြစ်သွားတာကို ကြားရတာ အရမ်းဝမ်းနည်းပါတယ်။ မင်းရဲ့ အကြံပြုချက်ကို ငါသေချာပေါက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တန်ဖိုးရှိသောအရာအတွက် - သင်၏မှတ်ချက်များသည် အရေးကြီးပြီး ၎င်းတို့ကို တန်ဖိုးထားကြသည်။
15:2009 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 4, 12 တွင်
တစ်စုံတစ်ယောက်က မေးခွန်းတစ်ခုမေးတဲ့အခါ အတူတူပါပဲ၊ ဥပမာ- “Indy & ကွာခြားချက်က ဘာလဲ။ . . . ” မကြာသေးခင်က မေးခဲ့တဲ့ တကယ့်မေးခွန်းပါ။ မေးသူကို စော်ကားတာဖြစ်နိုင်မှန်း သိတာကြောင့် အဖြေကို ရှောင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒုတိယ အကြိမ် မေးတဲ့အခါမှာတော့ သေချာပြန်ဖြေတယ်။ . . မေးသူသည် "အနှောက်အယှက်" ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အဖြေက လုံးဝမှန်ပေမယ့်။
မေးခွန်းတစ်ခုခုအတွက် အဖြေကို မကြားချင်ဘူးဆိုရင်တော့ ပထမနေရာမှာ မမေးပါနဲ့။